Website-ka UEFA oo lagu soo bandhigay rikoorada aysan weli jebin Cristiano Ronaldo & Lionel Messi. | Ciyaarside.com
Website-ka UEFA oo lagu soo bandhigay rikoorada aysan weli jebin Cristiano Ronaldo & Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo & Lionel Messi waa labada xidig ee dunidaan casriga ah ka taliya dhanka kubadda cagta marka laga hadlo iney ahaayeen kuwa masraxyada caalamiga ah ku dagaalamay 10-kii sano ee ugu dambeeyay, balse waxaa jira rikooro aysan wali jabin oo la xariira tartamada yurub.
Website-ka UEFA ayaa lagu soo daabacay dhawr rikoor oo aysan wali jabin isla markaana qaarkood ay yahiin kuwa aan loo dhawaan karin oo darajo ahaan aysan gaari karin Ronaldo & Messi.
Rikoorada aysan wali jabin waxaa dhigay qaar ka mid ah magacyo wacdaro kasoo dhigay yurub – Alfrédo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimović, Ryan Giggs, Paolo Maldini, Roy Makaay & xidigo kale.
CR7 & LM10: Messi wuxuu dhaliyay final-ka tartanka laba gool 2009 iyo 2010, halka Ronaldo uu dhaliyay 4-gool, 2008, 2014 iyo 2017. Cristiano wuxuu kasoo muuqday 5- final oo UCL, wuxuuna sadex ka yar yahay xidigaha ugu badan ee rikoorkaas heysto Francisco Gento (Real Madrid) iyo Paolo Maldini (AC Milan).
GOOLASHA DHAQSIDA LEH:
GOOLASHA HAL FASAL:
GOOLASHA XIRIIRKA AH: